Intel ရဲ့ 11th Gen Tiger Lake Processor မှာ ဘာထူးခြားလာမလဲ?
CES 2020 ပွဲကစလို့ AMD နဲ့ လုံးချာလိုက်နေတဲ့ Intel အကြောင်းကို စာဖတ်သူတွေ သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။
Zen2Architecture ၊ 7nm Process နဲ့ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Ryzen 4000 Series မိုဘိုင်း ပရိုဆက်ဆာတွေဟာ ပွဲဆူခဲ့သလို ကုမ္ပဏီအတွက် စျေးကွက်တစ်ခု ဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ် ဆိုရင်မမှားပေဘူး။
Intel အနေနဲ့ ဆယ်စုနှစ် အဆက်ဆက် ပရိုဆက်ဆာ မားကတ်မှာ ကြီးစိုးခဲ့တဲ့အလျှောက် Research ပိုင်း အားကောင်းခဲ့တဲ့ AMD နဲ့ ယှဥ်ဖိုက်တဲ့ 2020 မှာတော့ သိသာတဲ့ ရလာဒ်တစ်ခုနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။
အဲ့ဒါကတော့ စျေးကွက်ရှယ်ယာ လျော့နည်းသွားတဲ့အပြင် Intel ကို ကျော်တက်ပြီး စျေးကွက်တန်ဖိုး မြင့်တက်ခဲ့တဲ့ Nvidia ပါ။
သုတေသီတွေ အဆိုရ 2020 မှာ AMD ဝင်ငွေကောင်းနေခဲ့တဲ့အပြင် Core Processor တွေ လက်ဝါးကြီးအုပ်နေတဲ့ လက်တော့စျေးကွက်အထိပါ ထိုးဖောက်နိုင်ခဲ့တာပါ။
The Intel Corp. logo via Getty Images
သို့ပေမယ့် Premium Ultrabook ၊ Gaming Laptop တွေမှာတော့ Ryzen မိသားစု မတွေ့ရသေးသလို တစ်ချိန်ချိန်ကျ မျှော်မှန်းလို့ ရလာမယ် ထင်ပါတယ်။
Intel အနေနဲ့ Momentum ထိန်းထားဖို့ရာ ဝှက်ဖဲကစားဖို့ အချိန်ကျနေသလို AMD ထက် နှာတဖျားသာနေဖို့ ပြင်ဆင်ထားတာ မျိုးလည်း ရှိပါတယ်။
Tiger Lake unleash
အဲ့ဒါက CES 2020 မှာ မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ Tiger Lake မျိုးဆက်ပါ။ အရပ်စကား အနေနဲ့ 11th Gen လို့ သုံးစွဲသလို ကောလာဟလတွေအရ 10nm ပေါ်မှာပဲ အခြေခံ ထုတ်လုပ်ထားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
အခုလို Fabrication Process မှာ AMD ကို မမီသေးပေမယ့် 11th Gen မှာ ထူးခြားလာတဲ့ အချက် (၂) ချက်ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါက Ice Lake (10th Gen) မှာ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ Sunny Cove Cores Architecture ကို အမွေဆက်ခံထားတဲ့ Willow Cove Cores ပါ။
Intel အဆိုရ Redesign လုပ်ထားတဲ့ Cache နဲ့ Transistor-level Optimization အသစ် ၊ အားဖြည့်ထားတဲ့ Security Features တို့ပါဝင်မယ် ဆိုထားပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက GPU ပိုင်းအတွက် ဖြစ်ပြီး Ice Lake တွေမှာ သုံးစွဲထားတဲ့ Generation 11 (Intel Iris Plus) ထက် ပိုကောင်းတဲ့ Generation 12 (Xe Graphics Architecture) ပါလာမှာပါ။
ဒါကြောင့် Tiger Lake Processor တွေဟာ CPU နဲ့ GPU နှစ်မျိုးလုံး အားဖြည့်ထားတယ် ဆိုနိုင်သလို ယေဘူယျအားဖြင့် 10th Gen ထက် Efficiency ပိုကောင်းမယ်လို့ သုံးသပ်ရပါတယ်။
လက်ရှိအနေထားအရ 11th Gen ကို မိုဘိုင်း Processor အဖြစ် အရင်အသက်သွင်းမှာ ဖြစ်ပြီး Intel ထုံးစံအတိုင်း Y-series ၊ U-series နဲ့ H-series ဆိုပြီး (၃) မျိုး တွေ့ရမှာပါ။
TDP အနေနဲ့ကတော့ ကွဲပြားမှုမရှိဘဲ Y မိသားစုက 4.5 W ကနေ9W အတွင်း သုံးစွဲမှာဖြစ်ပြီး 4-cores ၊ 8-threads Processor အနေနဲ့ မြင်တွေ့ရမှာပါ။
အရင် Generation နဲ့ မကွာဘူး ဆိုရပေမယ့် Graphics Technology (GT2) မှာ ပြောင်းလဲသွားတဲ့ Xe Graphics နဲ့တွေ့ရမှာပါ။
ဒါကြောင့် ပါဝါစားမှု အနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့ Y-series မှာ GPU ပိုင်း ပိုကောင်းလာမယ်လို့ သုံးသပ်ရပြီး အဓိက Popular ဖြစ်နေတာ Tiger Lake U တွေပါ။
ကောလာဟလတွေအရ Core i7-1065G7 ထက် ပိုစွမ်းဆောင်နိုင်သလို Sandra Benchmark အရ Ice Lake ရဲ့ 378.63Mpix/s ထက် ပိုများတဲ့ 401.96Mpix/s ရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဆိုပါ ရလာဒ်ဟာ Laptop အမျိုးစားနဲ့ ဆိုင်သလို အသုံးပြုထားတဲ့ Processor Configuration နဲ့လည်း အကျုံးဝင်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် 382.61 Mpix/s ရှိထားတဲ့ 3.6GHz မြန်နှုန်းရှိ Desktop Core i3-10100 ပရိုဆက်ဆာထက် မြန်ဆန်တာ အားရစရာပါ။
သုံးသပ်သူအဆိုရ Tiger Lake ဟာ နှေးကွေးတဲ့ Clock Speed (1.3GHz) ထက် ပိုမြန်တဲ့ 2.7GHz နဲ့ Run ထားသလို Turbo Frequency ကိုလည်း Sustain လုပ်နိုင်တယ် ဆိုထားပါတယ်။
Boost Frequency အနေနဲ့ 4.3GHz ရှိနေသလို 11th Gen တွေဟာ 4.5GHz အထိ အမြင့်ဆုံး ထောက်ပံ့မယ်လို့ သိထားရပါတယ်။ ဒါကြောင့် 10nm ချင်းအတူတူ Performance သိသိသာသာ Improve ဖြစ်လာပြီလို့ ဆိုရမှာပါ။
U-series မှာ 15 W ကနေ 28 W အတွင်း ပါဝါသုံးစွဲမှုရှိမယ့် 4-cores ၊ 8-threads Processor အနေနဲ့ မြင်ရဖို့ရှိပြီး Xe Graphics နဲ့အတူ Intel မိတ်ဆက်လာမှာပါ။
ဒီနေရာမှာ Xe Graphics အကြောင်း နည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်။
အမြင့်ဆုံး အနေနဲ့ တွေ့ရမယ့် Xe G7 မှာ 96 EUs (Execution Unit) နဲ့ 768-cores ပါဝင်မှာပါ။
ယေဘူယျအားဖြင့် GeForce GTX 950M ၊ 860M တို့ထက် ပိုမြန်သလို GTX 960M နဲ့ သိပ်မကွာတဲ့ Performance မှာ ရှိနေမှာပါ။
CPU Family Tiger Lake U-series Renoir U-series
Family 11th Gen Ryzen 4000
Architecture Willow Cove Zen2
Max Clocks TBD 4.2 (Ryzen74800U)
GPU Architecture Xe Graphics Vega Enhanced
Max GPU Clock 1,300 MHz 1,750 MHz
TDP (cTDP) 15W (12W ~ 28W) 15W (10W ~ 25W)
Tiger Lake မိသားစုမှာ Xe G7 ၊ G4 ၊ G1 (၃) မျိုး တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး အနိမ့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ G1 စွမ်းဆောင်ရည်ဟာ GeForce MX230 အပေါ်မှာ ရှိနေပါတယ်။
ဒါကြောင့် Graphics ပိုင်းမှာ 10th Gen ထက် Performance (၂) ဆ ပိုတိုးလာတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပြီး Intel မိတ်ဆက်တဲ့အချိန်ကျ အသေးစိတ် သိရမှာပါ။
တတိယ အနေနဲ့ ပြောလိုတာ H-series တွေပါ။ Redesign Cache ဆိုတဲ့အတိုင်း 34MB အများဆုံး ပါဝင်လာနိုင်ပြီး L3 Cache 24MB (3MB L3 Per Core) ၊ 10MB L2 (1.2MB Per Core) မြင်ရနိုင်ပါတယ်။ L1 Cache အနေနဲ့ 48/32KB ပါဝင်ပြီး AVX2 နဲ့ AVX-512 Instruction ထောက်ပံ့ထားမယ်။
8-cores ၊ 16-threads အမြင့်ဆုံး အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး H-series မှာ Level Memory နှစ်ခု (2LM) နဲ့ SGX (Software Guard Extensions) တို့ Featuring လုပ်ထားမှာပါ။
ဒါကြောင့် Tiger Lake H တွေဟာ DDR4 နဲ့ LPDDR4x Memory အမျိုးစား (၂) ခု ထောက်ပံ့မှာဖြစ်ပြီး Frequency အနေနဲ့ 3,200 MHz ၊ 4,266MHz ရရှိမှာပါ။
Y-series တွေကတော့ LPDDR4X RAM နဲ့ပဲ မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး SGX ကတော့ သိတဲ့အတိုင်း Undervolt လုပ်မရအောင် ပိတ်ထားတာမျိုးအတွက် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
10th Gen ကစလို့ Intel Processor တွေကို Undervolt လုပ်ဖို့ မလွယ်တော့သလို OEM တွေအနေနဲ့လည်း Bios Update လုပ်ပြီး 9th Gen ၊ 8th Gen တွေအထိ Limit လုပ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ သိထားရပါတယ်။
အဆိုပါ ကန့်သတ်တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ 2020 ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက်နေ့မှာ Intel ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဓိက SGX Extension ကနေ Hack လို့ရနေတဲ့ အားနည်းချက်ကြီးပါ။
ပုံစံက Haswell မိသားစုမှာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ Spectre ၊ Meltdown တို့နဲ့ ဆင်တူဖြစ်ပြီး Skylake (6th Gen) ကစလို့ Affective ဖြစ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
MSI Prestige 14 (Carbon Grey)
ဒီတော့ စာဖတ်သူတွေ အနေနဲ့ ဘယ်လိုမြင်လဲ? မိုဘိုင်း Platform မှာ ကျားအိုင်ကို မြင်တွေ့ရတော့မှာ ဖြစ်သလို တဖက်မှာလည်း အမ်ပီယာတွေ သွေးဆာနေပါတယ်။
တစ်ခုရှိမှာ Ampere တွေကို Desktop တွက် မိတ်ဆက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် မိုဘိုင်းသမားတွေ အချိန်တစ်ခုတော့ စောင့်ရနိုင်ပါတယ်။
Intel အနေနဲ့လည်း ပွဲထုတ်ရင် Y နဲ့ U ကို စျေးကွက်အရင်ခင်းလောက်ပြီး H-series တွေက အနည်းငယ် နောက်ကျမယ် ထင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Performance Improve ဖြစ်လာမယ့် 11th Gen ကို စောင့်ကြည့်တာ ပိုသင့်တော်မှာပါ။
အကယ်လို့ အခုချိန်မှာ Laptop ဝယ်ဖို့ စဥ်းစားထားရင် ၁ လ လောက် အောင့်အီးနေလိုက်တာ ကောင်းပါတယ်။
ကောလာဟလတွေမှာလည်း 11th Gen အပြင် Athena Certified Laptop စသဖြင့် အလျှိုလျှို ထွက်နေလို့ Ultrabook တွေ ပိုကြမ်းဦးမယ်လို့ ပြောနိုင်နေတာပါ။
Intel အနေနဲ့လည်း စက်တင်ဘာလ (၂) ရက်နေ့မှာ မိတ်ဆက်တော့မှာ ဖြစ်သလို စာဖတ်သူတွေ စိတ်ဝင်စားမယ့် Ryzen နဲ့ ဘယ်လို Compete လုပ်မလဲ? Tiger Lake မိသားစုကို ကြည့်ရင်း ကျွန်တော်တို့ တခါပြန်စုံကြတာပေါ့။
Source: Wccftech 1 ၊2Xe Graphics NoteBookcheck ၊ WindowsCentral